- UK 2021 ✅ रणनीति
Home » क्यासिनो खेलहरू » रूलेट » Labouchere रणनीति
शर्त रणनीति कसरी काम गर्दछ?
Labouchere को राम्रो पोइन्ट र खराब पोइन्ट्स के हुन्?
Labouchere को पृष्ठभूमि को बारे तपाईलाई के जान्नु पर्छ?
रूलेट रणनीतिहरू धेरै प्रकारका र फरक कठिनाई स्तरहरूमा आउँदछन्। धेरै अनौपचारिक रूलेट प्लेयरहरूको लागि, सबैभन्दा लोकप्रिय मार्टिaleगेल रणनीति हो जुन प्रत्येक घाटा पछि सजीलो पालना शर्त व्यवस्थाको लागि कल गर्दछ। यसको सरलताले यसलाई आज व्यापक रूपमा प्रयोग हुने रणनीतिहरूमध्ये एक बनायो। तर त्यहाँ अझै एउटा रणनीति छ जसलाई अलि अनुसन्धान र कडा परिश्रमको आवश्यकता छ: ल्याबोचेर रणनीति।
एक सट्टेबाजी रणनीति को रूप मा, Labouchere सबै शर्त विकल्प मा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर कालो वा रातो मा दांव जस्तै एकको दोगुनी को डबल गर्न सक्छन् कि मा राम्रो लागू छ। यो रणनीतिले काम गर्नका लागि तपाईले संख्याहरू तल सार्न र सम्पादन गर्न आवश्यक हुन्छ, प्राथमिकतामा कलम वा कागज वा मोबाइल उपकरण प्रयोग गरेर।
सुरू गर्न, तपाईले चाहानुहुन्छ कि शर्त को लागी पहिले निर्णय गर्नु पर्छ, र तपाई संख्याको शृंखला लेखेर यो गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि नम्बरहरू छनौट गर्नुहोस्, र तपाइँ क्रमको लम्बाइ पनि निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नम्बरहरूको नमूना श्रृंखला छ जुन तपाईं विचार गर्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईं if १० जित्न चाहनुहुन्छ भने:
दिमागमा राख्नुहोस् कि अनुक्रम तपाईको व्यक्तिगत छनौट हो। यहाँ, तपाइँ पैसा कमाउन चाहानुहुन्छ पैसा will १० सेट गर्नुहोस्, र तपाइँले माथि देखाइएको अनुसार अनुक्रममा यसलाई विभाजित गर्नु पर्छ। जब तपाईं रूलेट खेलमा सट्टेबाजी सुरू गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईंले क्रमको दायाँ र बाँया भागहरू लिनुपर्दछ, शर्त पहिचान गर्न तिनीहरूलाई थप्नुहोस्। माथिको उदाहरण श्रृंखला प्रयोग गरेर, तपाईंले Using २ को प्रारम्भिक ब्याट राख्नुपर्नेछ।
यदि तपाइँको शर्तले जित्नको लागि व्यवस्थित गर्दछ, तपाइँले श्रृंखलाहरूमा यी संख्याहरू रद्द गर्नुपर्नेछ किनभने तपाइँको लक्ष्यको एक अंश प्राप्त भयो। संख्याको समान श्रृंखला प्रयोग गरेर, श्रृंखला अब तलको जस्तो देखिनेछ:
अब, तपाइँ शर्त प्रक्रियाको दोस्रो चरण बनाउनुहुनेछ। फेरि, तपाइँले आफ्नो श्रृंखलाको बाँया र दाँया पट्टि रहेका नम्बरहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ। उदाहरण प्रयोग गरेर, संख्या १ र १ छन्, तपाईको शर्त £ २ मा फेरि राख्छ। तपाईंले यस प्रक्रियालाई दोहोर्याउन आवश्यक पर्दछ जब सम्म श्रृंखला का सबै नम्बरहरू रद्द गरीएनन्।
यदि उदाहरणको लागि, तपाईंले आफ्नो शर्त हराउनु भएको छ, तपाईंले श्रृंखलामा नम्बरहरू रद्द गर्नु पर्दैन। तिनीहरूलाई रद्द गर्नुको सट्टा, संख्या थप गर्नुहोस् जुन तपाईंले भर्खर संख्या अनुक्रमको दायाँ भागमा बगेको छ। यदि तपाईं प्रारम्भिक शर्त बनाउनु भयो र तपाईंले यसलाई खेलमा हराउनु भयो भने, नम्बरहरूको अनुक्रम तलको जस्तो देखिनेछ:
दिमागमा राख्नुहोस् कि Labouchere रणनीति को मुख्य उद्देश्य श्रृंखला मा सबै संकेत नम्बरहरु रद्द गर्नु हो। र यो शर्त बनेको जीत गरेर गरिन्छ। यदि शर्त हराएको छ भने, क्रम (शर्तको राशि) त्यसपछि क्रममा थपिनेछ, विशेष गरी श्रृंखलाको दायाँ भागमा।
यहाँ केहि रिमाइन्डरहरू छन् जुन तपाईले यो रणनीति खेल्दा दिमागमा राख्न चाहानुहुन्छ।
पहिले, तपाईंले जीत कमाए पछि बाँया र दाँया दुबै नम्बरहरू रद्द गर्नु आवश्यक छ।
नम्बरहरू रद्द नगर्नुहोस् यदि तपाईंले घाटा सामना गर्नुभएको छ। तपाईंले यी अनुक्रमको दायाँ पट्टि थप्नु पर्छ।
अन्य शर्त वा खेल रणनीतिहरू जस्तै, Labouchere पनि आफ्नो पेशेवर र विपक्षको सेटको साथ आउँदछ। यस रणनीति को बारे मा सबै भन्दा राम्रो चीजहरू यो हो कि यो लगभग% 33% ब्याज लिन्छ एक लाभ कमाउन। रणनीतिमा भएका केहि परिक्षण अनुसार, खेलाडीहरूलाई केवल% 33% प्लस २ बेट्स चाहिन्छ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ रूलेट तालिकामा round 75 राउन्डहरू खेल्नुहुन्छ, तपाइँलाई नाफा कमाउन केवल २ plus भन्दा बढी २ बेट्स चाहिन्छ। यो एक कम रकम मानिन्छ, जसले Labouchere लाई एक विजेता नोटमा दिन समाप्त गर्न चाहने खेलाडीहरूको लागि एक आदर्श रणनीति बनाउँछ।
जबकि यो जानकारी अपील गरीरहेको छ, दिमागमा राख्नुहोस् कि यो गणना मात्र सिद्धान्त मा आधारित छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि रौलेटको प्रत्येक खेल र बल खसाल्ने कार्य अनौंठो छ। र रूलेटमा मार्टिale्गेल रणनीति जत्तिकै, त्यहाँ ठूलो सम्भावना छ कि तपाईं खराब लामो स्ट्रिमको साथ अन्त गर्नुहुनेछ। र जब यो हराउने लहर हुन्छ, यो अन्तत: एक ठूलो शर्तमा अनुवाद हुन्छ जुन खेल्नु आवश्यक पर्दछ, जबसम्म यो विन्दुमा पुग्दैन कि यो तपाईको लागि प्लेलि continue कम भइरहेको कारण यस खेललाई जारी राख्न सम्भव छैन।
Labouchere एक रूची रूले खेलाडी, हेनरी Labouchere द्वारा लोकप्रिय रूले खेल को लागी एक शर्त रणनीति हो
अन्य रौलेट रणनीतिहरूको तुलनामा, ल्याबोचेयरले एक खेलाडी संख्याको अनुक्रमको साथ आउँछ, रेकर्ड गर्नुहोस् र खेलका नतीजाहरूको आधारमा यी संख्याहरू परिमार्जन गर्नुहोस्।
शर्त व्यवस्था सुरू गर्न, खेलाडीहरूले बायाँ र दायाँ नम्बरहरू लिनु पर्छ र ती जोड्नको लागि ब्याजको मात्रा पहिचान गर्न यी थप्न आवश्यक छ।
यदि शर्त सफल छ भने, बायाँ र दायाँ नम्बरहरू रद्द गरियो
तर यदि शर्त हरायो भने, संख्या क्रमबाट हटाइदैन। यसको सट्टामा, wagered रकम अनुक्रमको दायाँ पट्टि थपिनेछ
केवल अन्य रणनीतिहरू जस्तै, Labouchere का आफ्नै पेशेवरहरू र विपक्षहरूको सेट छ। प्रणालीले खेलाडीहरुलाई एक राम्रो लाभ कमाउन को लागी अनुमति दिन्छ, तर यदि यो एक खराब हराउने लहर पूरा भयो भने यो पीडादायी हुन सक्छ
Labouchere लाई केहि काम र प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ। खेलाडीहरूले तिनीहरूको बाजी बनाउँदा नम्बरहरू लेख्नु पर्छ। यो रणनीति ब्रिटिश राजनीतिज्ञ र पत्रकार, हेन्री ल्याबुचेरलाई श्रेय दिइन्छ, जसलाई क्यासिनोको लागि जोखिम छ, विशेष गरी रूलेट। आज, यो विजय कमाउने ठूलो मौकाको साथ खेलाडीहरू प्रदान गर्ने सबै भन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने रणनीतिहरू मध्ये एक हो।